China Model No: Chinese Manufacture Automatic Control Y83 Series Hydraulic Metal Chip Briquetting Press Machine for Metal Recycling ifektri nabaphakeli | Hlanganisa phezulu
Inombolo Yemodeli: Isilawuli Esizenzakalelayo SaseShayina I-Y83 Series Hydraulic Metal Chip Briquetting Press Machine for Metal Recycling
I-Y83 uchungechunge lwe-hydraulic metal cake imvuthu umshini usetshenziselwa ikakhulukazi izinsalela zensimbi, izinsimbi zensimbi.
izinsalela zethusi kanye ne-aluminium scrap nezinye izindleko zokucindezelwa kwe-high-density cylindrical mass
ukwenza lula ukugaywa kabusha nokuncibilikiswa, ikakhulukazi ngemva kokucindezelwa enye insimbi yokusansimbi.
Le yindawo ka Origin E-JIANGYIN, ECHINA
Imodeli Uchungechunge lwe-Y83
Umfutho we-hydraulic 180-3000 Amathani
Uhlobo Uhlobo oluvundlile noma oluqondile
Usayizi we-briquette Ngokwezifiso
Ukusebenza Ukulawulwa kwe-PLC
Umshini wokunyathelisa we-Hydraulic scrap metal briquetting press unezinzuzo ezinhle embonini yokugaywa kabusha kwensimbi. Namuhla, ukushoda kwezinsiza ezikhona kuyinkinga izwe ngalinye elibhekene nayo. Akunandaba ukuthi amazwe asathuthuka noma athuthukile, indlela yokwenza kabusha engcono kakhulu kuhlale kuyisihloko esishisayo. Ngakho-ke siklama umshini oqondile oqondile noma ovundlile wohlobo lwe-hydraulic scrap metal briquetting press ukuze amaklayenti ethu abhekane nezinsimbi zawo ezilahliwe ukuze ahlangabezane nezidingo zamakhasimende ethu.
Umshini we-Hydraulic scrap metal chip briquetting press usetshenziselwa ukucindezela zonke izinhlobo zezinsalela zensimbi (i-cast iron scrap, i-copper scrap, i-aluminium scrap, njll.) ibe ngamabhulokhi ngokusebenzisa isikhunta, esilungele ukuthuthwa nokwelashwa kwezinsalela zensimbi. Umshini wokucindezela we-Hydraulic scrap metal chip briquetting uyithuluzi elifanele lefektri yethusi nensimbi, insimbi engeyona ayoni.
●Isistimu yakhelwe ngedivayisi yokuvuza kwangaphambili ukuze iqede ukushaqeka kwe-hydraulic.
● Izisetshenziswa ezisheshayo ezithuthukisiwe, zokuqinisekisa izidingo zokukhiqiza zomsebenzisi.
●Ingxenye kagesi isebenzisa uhlelo lokulawula oluzenzakalelayo lwe-PLC olungenisiwe.
●Umzimba oyinhloko wamukela isakhiwo sensimbi sisonke, amandla aphezulu, ukuzinza okuhle, awudingi ukufaka izikulufo zokubambelela.
● Umshini wokucindezela we-hydraulic scrap metal chip briquetting wamukela ukudluliswa kwe-hydraulic, i-valve block ephezulu yochwepheshe, umzila wokugeleza, ukuze ukulahlekelwa kwengcindezi yesistimu kube kuncane, kuqede ukungalungi kokuvuza.
● I-valve ye-cartridge ye-Adopt, i-electro-hydraulic proportional valve kanye ne-oil circuit circuit design, ukuze uhlelo lwe-hydraulic luphelele, ngisho nasesimweni somthwalo osindayo wesikhathi eside, uhlelo ngeke lubonakale lungalawuleki.
● Umshini wethu we-hydraulic metal baler ungakusiza ukuthi ulondoloze abasebenzi, uthuthukise ukutholakala kwensimbi, ukhuphule intengo yokuthengisa futhi uthuthukise inzuzo.
●Amaklayenti angakwazi ukwenza ngokwezifiso ukucaciswa kwephakheji nosayizi ngokwezidingo zawo.
IHydraulic Scrap Metal Chip Briquetting Press Machine Imininingwane：
Umshini wokucindezela we-Hydraulic scrap metal chip briquetting ufakwe isibonisi sombhalo esilungisekayo, ukulandelana kwesenzo futhi isikhathi ngasinye sesenzo silawulwa ngokuphelele uhlelo lwe-PLC, futhi lungalungiswa nganoma yisiphi isikhathi ngu-opharetha, olulula, olulula futhi oluqondakala kalula.
Umshini wokucindezela we-Hydraulic scrap metal chip briquetting ufakwe isidluliseli, ungabona ukuphakela okuzenzakalelayo, ukhuphule umthamo wansuku zonke futhi wonge abasebenzi.
I-hydraulic cylinder eyinhloko iqeda ukukhishwa kwensimbi futhi iqede izingozi zokuphepha ezingaba khona. Qinisekisa impilo yesevisi nokuphepha kwezinto zokusebenza. Ukufanisa uhlaka lwesikhunta kanye nesikhunta, ukucindezela phezulu ngomklamo wochwepheshe onamandla okucubungula aphezulu kuyisiqinisekiso sokunambitheka okuhle kakhulu kwemishini. I-punch yesikhunta kanye nomshini wokunyathelisa kufakwe insimbi enamandla engagugi engashintshwa ngokushesha. Ingaphambili le-punch ye-LINDUR yemodeli ifakwe indandatho yokucindezela ye-punch engagqoki ukuze kube lula ukuqaqa nokufaka, ukuze impilo yayo yesevisi inwetshwe. Izingxenye ezifanele zenziwe zaqina ngokukhethekile noma zenziwe umkokotelo lapho kunesidingo.
3. UHLELO LAMAHYDRAULIC
Umshini wokucindezela we-Hydraulic scrap metal chip briquetting wakhiwe ngenjini, iphampu ye-hydraulic, idivayisi yokuvikela iphampu, i-valve yokulawula uchwepheshe kanye nesistimu yepayipi exhunywe ne-block press. Idizayini enengqondo, ikhwalithi ezinzile. Ifakwe uhlelo lokupholisa, ukugwema imishini ayikwazi ukusebenza ngokuqhubekayo ngenxa yokushisa kwamafutha ngokweqile.
Umshini wethu wokunyathelisa we-Hydraulic scrap metal chip briquetting uhlinzeka ngezingxenye zomshini womkhiqizo odumile, besisebenzisana nabaphakeli abaningi abadumile emhlabeni wonke, njengo-SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI njalonjalo iminyaka engaphezu kwe-10.
Umshini wethu wokunyathelisa we-Hydraulic scrap metal briquetting usetshenziswa kabanzi embonini elandelayo:
●Umshini wethu wokucindezela izinsimbi ze-Hydraulic scrap metal briquetting ulungele amabhizinisi amakhulu ensimbi,
●Izingxenye ezinkulu zamandla omoya we-Foundry amabhizinisi e-Foundry.
● Abakhiqizi bemikhiqizo yethusi ne-aluminium.
● Izimboni zokusungula insimbi nezincibilikisayo, ezinye izinsimbi zezimboni noma i-chip metal ngesikhathi sokukhiqiza zingacindezelwa.
●Imboni yokucubungula imishini. Ukupakishwa nokuhlanganiswa kwezilahliwe, imfucumfucu, impushana nezinye izinto zensimbi kuwusizo olukhulu endaweni yokusebenzela, ukugaywa kabusha kwemfucuza kanye nokusetshenziswa kwabasebenzi.
Isimiso sokusebenza somshini wokucindezela we-Hydraulic scrap metal chip briquetting singomkhono wesikhunta sesilinda esiphakelayo sisuka ku-hopper ukwengeza izinto ezinomshini, ukwenza ukucindezela okungaphezulu kokushona phansi kwezinto kucindezelwe ekumisweni kwesistimu futhi kubuyiselwe imizuzwana engu-1 ~ 2, ukuthulula, ukusunduza isilinda samafutha sibuyele ngaphakathi. indawo, ngaphansi die engenhla uzofa isethi metal briquetting extrusion cavity, ukusunduza isilinda phambili izokwethula umgodi, briquetting ingcindezi isilinda ukubuya umjikelezo emsebenzini olandelayo. Ukugeleza komsebenzi: Isilinda sokuphakelayo esithuthukisiwe nesilinda esisetshenziswayo sokucindezela (isilinda esiyinhloko) ukuminyanisa okuya phansi, isilinda sempahla yokucindezela ukubuya imizuzwana engu-1 ~ 2 - isilinda samafutha aphushayo (isilinda esishunqayo) kulindeleke ukuthi sibuye -- isilinda sokucindezela ukuya phansi kwengxenye ye- -- cylinder ephushayo yethulwe ucezu lwengcindezi yeleveli eya phambili -- isilinda sokuphakelayo esibalulekile sesibuyile, emjikelezweni olandelayo womsebenzi.
Sizosebenzisa ukupakishwa kwefilimu esongwe kanye nokupakishwa ngokhuni ukuvikela umshini wethu wokunyathelisa we-hydraulic scrap metal briquetting.
Buka umshini wokucindezela we-Hydraulic Scrap Metal Chip Briquetting Wokugaywa kabusha kwensimbi kuyasebenza!
Okwedlule: Inombolo Yemodeli: I-Chinese Manufacture Q91Y Series Hydraulic scrap metal esindayo umshini wokugunda
Olandelayo: Inombolo Yemodeli: Isilawuli Esizenzakalelayo SaseShayina I-Y81 Series Hydraulic Scrap Metal Press Aluminium Baler Machine for Metal Press Recycling
I-Y81 Hydraulic Baler, I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya, I-Pop-Top Can Baler Equipment, I-Leaf Compactor kanye ne-Baler, I-Scrap Metal Compactor, Umshini we-Aluminium Foil Baler,